Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad Lagu Xusayay Aas’aaskii OLF oo Manchester Lagu Qabtay.
Xaflad Lagu Xusayay Aas’aaskii OLF oo Manchester Lagu Qabtay.
Posted by Dulmane	/ January 11, 2018
Xalay oo Khamiis ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 11/1/18 waxaa magaalada Manchester ee wadanka Ingiriiska kaqabsoomay xaflad siwayn loosoo agaasimay oo lagu maamuusayay aas’aaskii Jabhada Xoraynta Oromada ee magaceeda loosoo gaabiyo OLF.
Xafladan oo ahayd mid taariikhi ah dad badana ay kasoo qayb galeen ayaa lagu casuumay Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee magaalada Manchester, waxaana xaflada kaqayb galay mas’uuliyiinta Jaaliyada Ogadenia ee deegaankaas.
Sidoo kale waxaa xaflada kasoo qayb galay mas’uuliyiin sar sare oo katirsan Jabhada Xoraynta Oromada OLF, kuwaas oo khudbado taariikhi ah goobta kasoo jeediyay, waxayna mas’uuliyiintu hadalkooda diirada kusaareen isbadalka geeska Africa iyo sida looga faa’iidaysan karo.
Sidoo kale waxaa xaflada hadalo qiiro leh kajeediyay mas’uuliyiinta Jaaliyada Oromada ee wadanka UK, kuwaas oo soohadal qaaday colaada u dhaxaysa labada shacab ee Oromada iyo Soomaalida.
Mas’uuliyiinta ayaa si midaysan colaadaas ugu sheegay mid nasiib daro ah oo taliska wayaanuhu uu abaabulay isla markaana uu hadaba dabada kasii riixayo, waxayna mas’uuliyiintu xuseen in uu dhiig badani kudaatay.
Dhinaca kale waxaa xaflada khudbado mug iyo miisaanba leh kajeediyay mas’uuliyiinta Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee magaalada Manchester, waxayna mas’uuliyiintu kubaaqeen in lajoojiyo colaada gacan kurimiska ah ee taliska wayaanuhu uu dhex dhigay labada shacab ee dariska ah.
Gabagabadii xafladii xalay oo mudo dheer socotay ayaa kudhamaatay si nabad galiyo ah waxaana xaflada siwayn loogu soo bandhigay taariikhda halganka shacabka Oromada.